इटालीले चीनबाट सिकेन, अरूले इटालीबाट सिकून्
महामारीका सुरुवाती दिनमा इटालीका प्रधानमन्त्री र अन्य उच्च अधिकारीले ठूलो जोखिम छैन भनेर खतरालाई कम आँक्ने प्रयास गरिरहे। जसले दुविधा र सुरक्षाको झुटो भाव पैदा गरिरह्यो।
पूरै देश लकडाउन गर्ने निर्णयपछि पनि सरकारले महामारी कति खतरनाक छ भनेर जनतालाई बुझाउन सकेन। त्यसैले इटालीका नागरिक लकडाउन तोडेर बाहिर निस्किरहे, भाइरस अझ तीव्र गतिमा फैलाइरहे।
बेलायतमा पनि लकडाउन
मार्च २३ को साँझ बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरे।मानिसहरूलाई अत्यावश्यक कामका लागि दिनमा एक पटक मात्र बाहिर निस्किन अनुमति दिइएको छ। अत्यावश्यकबाहेकका सामग्री बेच्ने पसलहरू बन्द गराइएको छ।
‘हाम्रो मुलुक राष्ट्रिय संकटकालको क्षणमा छ,’ जोन्सनले भने, ‘त्यसैले जीवन बचाउन र बेलायतको स्वास्थ्य प्रणाली टिकाउन घरमै बस्न आवश्यक छ।’ उनले यी प्रतिबन्ध कम्तीमा तीन साताका लागि कायम रहने बताएका छन्।
बेलायतमा ६ हजार ६ सय ५० जना संक्रमित भएका छन् भने ३ सय ३५ ले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा भएको भनिएका पश्चिमा मुलुकहरू कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्खडाइरहँदा भारतमा यसबाट लाखौँको ज्यान जानसक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिइरहेका छन्।
भारतमा संक्रमितको संख्या ५० पुग्न ४० दिन लागेको थियो। तर, त्यसपछिको पाँच दिनमै त्यो संख्या दोब्बर अर्थात् एक सय पुगेको थियो। त्यस्तै, दुई सय पुग्न थप दुई दिन मात्र लागेको थियो। अमेरिकामा झैँ भारतमा पनि हरेक दुई दिनमा संक्रमितको संख्या दोब्बर हुनसक्ने खतरा छ। खासगरी, बिहार र उत्तर प्रदेशजस्ता जनसंख्या धेरै भएका गरिब राज्यहरूमा संकट आइपर्ने आकलन गरिएको छ। अधिकांश भारतीय राज्यले लकडाउन गरेका छन्। हाल भारतमा ५ सय ८ संक्रमित फेला परेका छन् भने १० जनाको ज्यान गइसकेको छ।
‘मान्छे मरून्, बजार घाटामा जानुभएन’
आइतबार मध्यराति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्वीट गरे, ‘समस्याभन्दा त्यसको समाधान झन् खराब हुन हामी दिँदैनौँ। १५ दिनपछि हामी कुन बाटो जाने भन्ने निर्णय लिनेछौँ।’
ट्रम्पले के भन्न खोजेका हुन् भन्ने बुझ्न उनको यो विचारको स्रोतसम्मै पुग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको अघिल्लो दिन फक्स न्युजका कार्यक्रम प्रस्तोता स्टिभ हिल्टनले सोसल डिस्ट्यान्सिङको पक्षमा बोलिरहेका ट्रम्पका चिकित्सकीय सल्लाहकार डा. एन्टोनी फौचीको आलोचना गर्दै भनेका थिए, ‘रोगभन्दा उपचार खराब भन्ने प्रसिद्ध भनाइ थाहा छ? हो, हामी त्यसैतर्फ जाँदैछौँ।’
भाइरस रोक्न चालिएको कदम भाइरसभन्दा खतरनाक भएको हिल्टनको दाबी थियो। रिपब्लिकन पार्टीका कार्यकर्ताहरू भाइरसप्रति सरकारले बढ्ता प्रतिक्रिया जनाएको आरोप लगाइरहेका छन्। अघिल्लो साता ‘द वाल स्ट्रिट जर्नल’ले भने सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दी दुई साताभन्दा बढी कायम रहे अमेरिकाले कल्पना गरेभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने चेतावनी दिएको थियो।
लकडाउनको आर्थिक बेफाइदा छैन भन्ने होइन। तर, आर्थिक क्षति पछि पूर्ति गर्न सकिन्छ। अहिलेलाई आधारभूत आयको सुनिश्चितता, छुटजस्ता उपाय अपनाएर मानिसको ज्यान बचाउन सकिन्छ। तर, भाइरसले कसैलाई छुट दिँदैन। तसर्थ दक्षिणपन्थी र बजार अर्थतन्त्रका पक्षधरहरू मानवीय क्षतिको तुलनामा आर्थिक क्षतिप्रति बढी त्रस्त देखिन्छन्।तिनको तर्क सामाजिक डार्बिनवादभन्दा अझ तल्लो स्तरको देखिन्छ। वास्तवमा तिनीहरू विद्यमान अर्थ व्यवस्थालाई टिकाउन ‘जति मान्छे मर्छन्, मरून्’ भन्ने तर्क गरिरहेका छन्। दुःखको कुरो, संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली देशका राष्ट्रपति पनि यस्तै विचार राख्छन्।
अमेरिकामा अहिले ४६ हजारभन्दा बढी संक्रमित फेला परिसकेका छन् भने ५ सय ८६ को ज्यान गइसकेको छ। न्युयोर्कमा मात्रै झण्डै २२ हजार संक्रमित भएका छन्।
विश्वव्यापी रूपमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४ लाख पुग्न लागेको छ। ३ लाख ८१ हजार संक्रमित पुष्टि भइसकेको छ भने १६ हजार ५ सय ५८ ले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अस्पतालबाट निको भएर घर फर्किनेहरूको संख्या पनि एक लाख नाघेको छ।
कोरोना भाइरस रोक्ने खोप तथा औषधि बनाउन विश्वका विभिन्न मुलुक लागिपरेका छन्। एकाध ठाउँमा तिनको प्रयोग पनि सुरु भइसकेको छ। तर, अझै महिनौँसम्म ती आम प्रयोगका लागि उपलब्ध नहुने निश्चित छ।